တရုတ်ကြိုးမဲ့သက်ရောက်မှု Wrench ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Feihu
Feihu ကြိုးမဲ့သက်ရောက်မှု wrench သည် lug အခွံမာများ၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်ပါ ၀ င်သောမောင်းသူမပေးနိုင်သောအလွန်မြင့်မားသောအလှည့်လည်ပတ်မှုပေးသည်။ ၎င်းကိုမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ခြင်း၊ အကြီးစားစက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထုတ်ကုန်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အဓိကဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများနှင့် torque output မြင့်မားရန်လိုအပ်သည့်အခြားဥပမာများကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
Feihu ကြိုးမဲ့သက်ရောက်မှုလိမ်ဖဲ့ခြင်းသည် kinetic energy ကို output shaft သို့လွှဲပြောင်းပေးသော internal hammering ယန္တရားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အသေးစိတ်ကတော့ -
ပါဝါအရင်းအမြစ်: lithium ဘက်ထရီ
အားသွင်းချိန် - ၂ နာရီ
မြန်နှုန်း: 0-2000 RPM
မက်စ် torque: In- ပေါင် 320 Nm / 2830
Chuck အရွယ်အစား - ၁၄-၂၈ မီလီမီတာ
အလေးချိန် - ၁၆၆၀ ဂရမ်
၁. ကျစ်လစ်ပြီးအားကောင်းခြင်း ၂၁ ဗို့အားသက်သော့ခတ်နိုင်သည့်စွမ်းအားမြင့်မော်တာဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးအရှိန်အား torque 320 Nm နှင့် 2000 speed RPM အမြန်နှုန်းကိုရရှိစေသည်။
2.Infinitely Variable Speeds: Variable Speed ​​ခလုတ်နဲ့အတူသင့် wrench ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သင်ခလုတ်တွန်းအားပေး, သက်ရောက်မှုလိမ်ဖဲ့ခြင်း၏အမြန်နှုန်းမြင့်။ ခလုတ်ကိုလွှတ်ပြီးတာနဲ့ဒီ tool ဟာချက်ချင်းရပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုချိန်မှာပိုပြီးလုံခြုံစေမှာပါ။
3. ပါဝါအညွှန်းကိန်းနှင့် LED မီး - အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် 21V 2000mAh လီ - အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသည်ဤကိရိယာကိုကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ပါဝါအညွှန်းကိန်းသည်မည်မျှအသုံးပြုနေသည်ကိုပြသပြီးသင်၏အချိန်ကိုအားသွင်းရန်သတိပေးသည်။ LED အလင်းဖြင့်သင်အမှောင်ထုတွင်ပင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအလုပ်နေရာကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။
4. အကြီးစား Duty နှင့် Ergonomic ဒီဇိုင်း - သံမဏိခေါင်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ဤကိရိယာ၏သက်တမ်းကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ တင့်တယ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူရော်ဘာ Over-mold လက်ကိုင်သည်အမြင့်ဆုံးသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးတုန်ခါမှုလျော့နည်းစေသည်။
Feihu ကြိုးမဲ့လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည်သင်၏အလုပ်ကိုလွယ်ကူ။ အဆင်ပြေစေသည်။
Brushless ကြိုးမဲ့သက်ရောက်မှု Wrench
ကြိုးမဲ့သက်ရောက်မှု Wrench Brushless
ကြိုးမဲ့ Wrenches မြင့်မားသောသက်ရောက်မှု
သက်ရောက်မှု Wrench ကြိုးမဲ့